Xildhibaan Nimco Caarshe oo dowladda u jeedisay in ay jawaab ka bixiso tacadiga iyo dilkii lagula kacay Caasho Ilyaas – Kalfadhi
Xildhibaan Nimco Caarshe oo dowladda u jeedisay in ay jawaab ka bixiso tacadiga iyo dilkii lagula kacay Caasho Ilyaas
Gudoomiyaha guddiga haweenka, arrimaha qoyska iyo xuquuqda Aadanaha golaha wakiillada Puntland Xildhibaan Nimco Cabdi Caarshe ayaa cambaaraysay falalka kufsiga iyo dilka isugu jira ee sii kordhay. Waxay sheegtay in arrintaas ay tahay qorshe ka weyn kufsasho oo keliya, balse la doonayo in lagu khalkhalgelinayo amniga.
Xildhibaan Nimco Caarshe oo qoraal ay arrintan ka samaysay la wadaagtay warbaahinta Kalfadhi waxay dowladda ugu baaqday in ay tallaabooyin wax ku ool ah ka qaaddo falalkan oo ah kuwa aan la sii fiirsan karin.
Arbacadii toddobaadkan ayaa Garowe inta la kufsaday deedna lagu dilay gabar xaamilo ah oo dhashay laba carruur ah, rag aan weli la xaqiijin tiradooda ayaa ugu dhacay gurigeeda goor barqo ah, waxaana ilo xog ogaal ahi ay sheegeen intii kufsigu socday in gabadha bac madaxa loo geliyay taas oo keentay dhimashada.
Booliska Garowe ayaa falkaas u qabtay ilaa 5 qof, welise lagama bixin faahfaahin rasmi ah.
Xildhibaan Nimco, gudoomiyaha guddigu waxay dhaliishay dib u dhaca iyo jawaab la’aanta baaritaanada kiiskii kufsiga iyo dilka isugu jiray ee laba bilood ka hor lagula kacay Caasho Ilyaas Aadan oo 12 jir ahayd.
“Waxaan leenahay aan aragno ragii Caasho kufsiga iyo dilka isugu daray iyadoo la xukumay oo weliba xukunka fulin loogu daro. Markaas ayaa laga nasanayaa arintaan” Ayay tiri Xildhibaan Nimco
Waxay ugu baaqday dowladda in aan wax ka qabashada kiisaskaas lagu hallayn odoyyo dhaqameed, loona baahan yahay bay tiri in sida loogu igmaday ay dowladdu tallaabo uga qaaddo falalka noocaas ah ee sii kordhaya.
Golaha wakiillada Puntland iyo bulshada rayidka ah ayaa laba bilood ka hor markii uu dhacay kiiska Caasho Ilyaas waxay u jeediyeen odoyyada dhaqanka in ay ka fogaadaan faragelinta gar-naqsiga la xiriira kiisaska kufsiga, iyagoo dowladda ugu baaqay in ay kaalinteeda ciyaarto.
Dowladda Puntlad ayaa 2016kii dhamaystirtay xeerka kufsiga kaas oo adeegsigiisa ay hay’adaha garsoorku dhaqangeliyeen isla sanndkaasba. Dadka lagu helo falalka noocaan ah ayuu xeerku mutaysiinayaa ciqaabo adag.
Madasha bulshada rayidka ah ee la talinta baarlamanka Puntland oo la daahfuray
Kulankii Amniga Dalka looga doodayey oo uu Golaha Shacabku yeelanayo maanta